Maaskaro Kn95 ah, maaskaro ilaalin ah N95, maaskaro la isticmaali karo - Felix
Kn95 waa maaskaro mashiinka caadiga ah. Qalabka neefsashada ee loo yaqaan 'Kn95 respirator' waa nooc ka mid ah qalabka neef-mareennada leh wax-ku-oolkaha ku tirtiridda maaddada ee waddankeenna. Maaskaro Kn95 iyo maaskaro N95 runtii waa isku mid marka loo eego waxtarka filtarrada qaybta.
Maaskaro la tuuri karo ayaa laga sameeyaa wax ka badan saddex lakab oo ah 28g maro aan-lahayn; sanka wuxuu ka samaysan yahay bey'ad saaxibtinimo dhammaan balastar balaastig ah, oo bilaa bir ah, oo leh hawo maroojiyeyaal (maaskarada qalliinka caafimaad) ayaa ka hortegi kara caabuqa neef-mareenka ilaa xad, mana ka hortegi karto nabaro.
Shirkadeena waxaa la aasaasay 2005, waa xirfadle soosaarid R&D ah iyo iibinta notebook, Xusuus qoryo dhejis ah, Faylka faylka, Gacmo nadiifiye, maqaar PU, Waxyaabaha PPE iwm. Shirkadda Warshadaha. Waxaan joognaa magaalada Shenzhen oo leh marin gaadiid oo ku habboon. Ilaa maantadan la joogo, waxaan haysannaa koox ka badan 300 oo qof iyo tobannaan sano oo waayo-aragnimo ganacsi shisheeye ah, Alaabooyinkeenna waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Koonfur Ameerika, Australia, Afrika iyo Aasiya.
Wax kasta oo badeecad ah, waxaan ka bilaabi doonnaa iibka alaabada ceeriin, ilaa waxsoosaarka badeecada, ilaa baakadaha iyo shixnadaha, ilaa bixinta kastamyada iyo ka tagista dekeda, tallaabo kasta waxaa si adag u xakameeya xirfadleyda, si aan u hubinno in badeecadu ku jirto xaalad wanaagsan oo ay gaaraan macaamiisha waqtiga ku jirta.
Shiine alaab tayo sare leh oo iibiya weji daboollaha ah